हरेक आमा, साथै एक स्वस्थ आहार गर्न Aspire गर्नेहरूलाई रूपमा, सामान्यतया नास्ता लागि स्वादिष्ट र पौष्टिक porridge पकाउन। निस्सन्देह, तपाईं सामान्य भन्दा अलि पहिले प्राप्त छ। र विकल्प भात को porridge मा पतन भने, यो पनि आवश्यक त यो बिहान seethe हुनेछ, एकै रातमा भिजेको छ। यसलाई केही समय लाग्छ, र त सामान्यतया पर्याप्त छैन।
तर एक घर सहायक प्रत्येक खुसी मालिक - Multivarki - यो खाना पकाउनु उनको porridge गाह्रो छैन थाह छ। अधिक त्यसैले किनभने यो बचाउँछ समय, प्रयास र नसाहरू। पारंपरिक कुकर यो सहायक संग तुलना गर्न सकिन्छ। चामल दूध porridge multivarka मात्र कार्यक्रम र घडी को उत्पादनहरु डाउनलोड गर्न एक व्यक्ति आवश्यक छ। प्रत्येक मोडेल चमत्कार प्रविधि सुसज्जित बस समयमा काम गर्दछ जो एक विशेष "अलार्म घडी", संग। यो मतलब एउटा कुरा - दूध multivarka मा चामल porridge तपाईं यसलाई आवश्यक हुनेछ जब पकाएको हुन।
समाप्त उत्पादन को मात्रा तपाईं कसरी डाउनलोड गर्ने धेरै सामाग्री मा साथै कप को मात्रा मा निर्भर गर्दछ। उत्पादनहरु को एक मानक सेट:
साथै, तपाईंले एक वैकल्पिक र फल थप्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यो ब्लूबेरी हुन सक्छ। यो ट्याब मा उत्पादनहरु थप्न छैन, र multivarka तयार मा दूध porridge चामल पछि राम्रो छ। उत्पादन infused छ जब यो थप्न आदर्श। को जामुन देखि उत्पादन मा भिटामिन अधिकतम रकम दिने, आफ्नो उपस्थिति राख्ने। स्याउ कार्यक्रम को अन्त अघि दस मिनेट थप्न राम्रो हो। यो पनि नाशपाती, खुबानी, आडू लागू हुन्छ। तर छाँट्दछ वा सुकेको खुबानी porridge को तयारी को शुरुवात थप्न राम्रो छ। त्यसैले तिनीहरू नरम र juicier प्राप्त हुनेछ।
तपाईं multivarka मा porridge पकाउन अघि, तपाईं आफैलाई उपकरणको निर्देशनहरू familiarize पर्छ। त्यसैले, मोडेल आधारमा, निम्न मापदण्डहरु फरक हुन सक्छ:
प्रति सेवा दूध मात्रा घनघोर;
प्रति सेवा चामल को राशि;
प्रति सेवा तेल रकम;
खाना पकाउने समय;
पछिल्लो बिन्दु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। केही मोडेल मा, घडी जब कार्यक्रम मा हुनेछ, संकेत गर्छ अरूलाई गर्दा - यो काउन्टडाउन, जो दूध porridge चामल multivarka तयार मा पछि। आफ्नो प्रविधी मा निर्देशनहरू ध्यान दिएर पढ्नुहोस्।
उत्पादनहरु सामान्यतया निम्न क्रममा हालिदिए छन्: पहिलो चामल, त्यसपछि चीनी र घिउ, त्यसपछि दूध। सबै राम्ररी मिश्रित। Multivarki ढक्कन सुरक्षित बन्द, कार्यक्रम सेट (सामान्यतया "दूध porridge", "Porridge" वा "चित्र" - मोडेल आधारमा), र एउटा घडी। ढक्कन दृढ बन्द गरिएको छ भने, दूध भन्दा जोश सक्छ कि जोखिम, पूर्ण हटाइएका। Kasha कारण वर्दी गर्मी र वाष्प गठन गरिएको छ कि गर्न कप मा languishing।
यो अनाज को तयारी सजिलो त्यहाँ, राती अनाज भिजेको गर्न दूध को पकाउने प्रक्रियामा "भाग्नु" भनेर डर बिहान सबेरै उठ्नु कुनै आवश्यकता छ भन्ने छ। स्मार्ट "घर कुक" तपाईं को लागि सबै गर्नेछ। तपाईं बस ओछ्यानमा बाहिर प्राप्त, को स्वादिष्ट र तातो porridge आनन्द छ। तयारी सबै कदम सही बाहिर गरिएको छ भने, crumbly र स्वादिष्ट multivarka मा दूध porridge चामल प्राप्त। खानपान!
को सोडा कसरी बुझाने गर्न उत्पादन साँच्चै रसीला र स्वादिष्ट थियो भनेर
कसरी जाडो viburnum मा बचत गर्न सात तरिका
कसरी पकौडी आफ्नै पकाउने multivarka खाना पकाउनु?
एक घण्टामा जरुरी नगद ऋण
प्लास्टिक लागि कोल्हू: हाम्रो भविष्य रिसाइकिलिंग फोहोर निर्भर
4G संकेत यसको आफ्नै मा बलियो
सपनामा एउटा सर्प देखे भने के आशा गर्ने?
Bashkortostan र यसको परिणाम मा तूफान
घर मा पनीर खाना पकाउने।
Tsokkos छुट्टी होटल Apts (बिरालो बी)3* - फोटो, मूल्यहरु, होटल विवरण र समीक्षा